Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintay - BBC News Somali
Image caption Ahmed Kathrada 27 sano ayuu xirnaa
Markii uu 12 jirsaday waxa uu ku biiray oo xubin ka noqday dalladii da'yarta ay ku midowday ee Young Communist League, ka dibna waxa uu ku biiray xisbi la oran jiray Transvaal Indian Congress.
2013-kii waxa uu fursad u helay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama uu tuso qolkii uu ku xirnaa xabsigii Robben island, waxa uuna ku yiri "17 sano iyo bar ayaan qolkaan ku xirnaa. Waxaan waayey caruurtaydii".
Waxaa aad loo xasuustaa khudbaddii uu jeediyey markii uu dhintay Nelson Mandela Disembar 2013-kii. Waxa uu yiri "waxaan lumiyey walaal, nolosheydu waa ay marantahay, mana aqaano cid aan weheshado". Da'diisu waxay ahayd 87 sano.